I-china pp ungqimba lwesikhumba esingenalutho Umkhiqizi nomhlinzeki | Sihai
Kk ishidi lukathayela lisetshenziswa kakhulu ezimbonini eziningi, iphedi lesendlalelo lingusayizi ohlukile kk ishidi elingenalutho lemikhiqizo ehlukaniswe ukupakisha ibhokisi, ama-pallets nabanye ukupakisha. Iphedi lesendlalelo yishidi elingenalutho ngokuya ngemikhiqizo ehlukile, ukupakisha okuhlukile kukhiqiza usayizi owenziwe ngokwezifiso nomumo wemikhiqizo ehlukile futhi ivikele ekupakisheni nasekuthunyelweni. Isetshenziswa kabanzi ekufakweni kwamabhodlela nokuthunyelwa, izitoreji, izitolo zokugcina izimpahla, imikhiqizo yehlukile, ukugcinwa kwamathini, ukuthunyelwa kwamathini kanye namanye amabhodlela amathini okupakisha.
Iphedi lesendlalelo linezinzuzo ezifanayo ne-pp ishidi elingenalutho, isisindo esilula, amanzi, ukuqina, ukuqina, ukufana okufanayo, indawo ebushelelezi, ukumelana nokushisa okuhle, amandla aphezulu womshini, ukuzinza kwamakhemikhali okuhle kakhulu nokufakwa kukagesi, izici ezingezona ezinobuthi. Kungaba ngokuya ngohlelo lokusebenza olwehlukile engeza izinto ze-ESD ezenziwe nge-ESD pp ishidi elingenalutho lesendlalelo sephedi, engeza izinto ze-UV ezenziwe nge-UV zivikele amaphepha wensimbi wensimbi wensimbi ongasetshenziswa ngaphandle, kungenziwa ngezifiso usayizi ohlukile, umumo ohlukile wemikhiqizo ehlukile.
Langaphambilini pp ipayipi lesikhumba elingenalutho
Olandelayo: pp elingenalutho sheet kasilika osebenzisa ungqimba pad